Junior taona ny Mpanjakavavy lahatsary ho amin'izao tontolo izao ny Fiarahana - NY LAHATSARY AMIN'NY CHAT. Mampiaraka an-tserasera!
Junior taona ny Mpanjakavavy lahatsary ho amin'izao tontolo izao ny Fiarahana
Ny hotontosaina ireo lehibe kokoa
Madchenjahre einer Konigin dia Aotrisy sarimihetsika ny taona Ernst Matrioski
Ao amin'io horonantsary, remake of the matrix ny Mitovy anarana, naka sary mifototra amin'ny Comedy ny taona Sylvia Anna, Romy Schneider mitendry ny tanora Mpanjakavavy Victoria.
Ny sarimihetsika mampiseho ny fomba maro kokoa ny ankizy ny Mpanjakavavy avy tany grande-Bretagne manana, sy ny fomba havanay albert farany mianjera amin'ny fitiavana ny ampakarina, toy ny mpanolo-tsaina.
Desambra in Cologne, ary.
desambra tao Vienna. Ny toetra amam-panahy Victoria dia aseho amin'ny tena playful sy mahafatifaty fomba, mampiseho ny tia karokaroka, mahaliana sy manan-tsaina zazavavy, ary koa ny marefo, vehivavy tanora iray izay mianatra zavatra betsaka taty aoriana, indray andro, momba ny Mpanjakavavy avy tany grande-Bretagne. Na izany aza, te-hanao ny mpampianatra ny zavatra tsara dia tsara ho anao. Toy ny anao, na izany aza, izany dia soso-kevitra fa izy dia tokony efa manambady, izy, dia amin'ny soavaly-voasarika kalesy ao Paris nahita"zavatra raha oharina".
ao amin'ny andraikitry ny tena toetra amam-panahy
Na izany aza, izany dia manomboka ny orana be avy any amin'ny seranan-tsambo an-tanàna Dover, ary vokatr'izany, ny Mpanjaka vavy mahatonga Prince albert ny Saxe-Coburg ny mpitondra kapoaka sy ny fianakaviany ny raharaha ny amin'ny trano fisakafoanana ao Sost, izay niafara. Ny roa tamin'izy ireo hianatra hahafantatra, ary foana izy ireo tsy mahafantatra hoe iza izy ireo raha ny marina. Izay no dia raiki-pitia. Fa Victoria ahazoan'ny vadiny izany ny fitsingerenan'ny taona nahaterahan'i ny antoko ao Londres io maraina io. Albert, izay raha ny marina dia tsy hanatrika ny antoko tiany, resy lahatra ny Filan-kevitry ny tanàna. Noho izany, ny fanekena ny fanasana ny Fandresena, fa na dia izany aza. Dia tena mahagaga fa isika dia mahita ny Mpanjakavavy, ny tovovavy izay vaovao Regent namely tamin'ny alina. Eny, saingy tsy mahagaga raha toa ka amin'ny farany tadiavo ny teny hoe"Eny". Ho zava-dehibe, Matrioska nangataka remake ny sarimihetsika, tamin'ny voalohany, Sonja Ziemann. Amin'ny hariva ao Munich tamin'ny Vier Jahreszeiten trano fandraisam-bahiny, izay aseho amin'ny Magda Schneider, ny zanany vavy Romi sy Matrioshka, dia nanapa-kevitra tsy misy fanampiny lanonana mikasika ny anjara andraikitry ny tanora Mpanjakavavy ho azy. I petera Taona dia tonga toy ny iray amin'ireo mpirotsaka ho amin'ny fampakaram-bady ho an'ny iray tamin'ireo voalohany ny endrika ivelany amin'ny sarimihetsika. Izany dia nalaina tany amin'ny laboratoara Mangovitra, amin'ny Pfister, Wally, any Vienne sy ny manodidina azy. Ny fizarana ny horonan-tsary dia ampiasaina amin'ny Duke-Film GmbH amin'ny alalan'ny UFA-Filmverleih GmbH. Ny dikan-teny anglisy, antsoina hoe ao amin'ny United States, dia nizara ny Walt Disney ny Buena Vista distribution company. Ny horonan-tsary azo heverina ho iray karazana fambara ho an'ny ny horonan-tsary"sissy", izay nisy nijery ihany ny modely mitovy amin'izany ny andraikitry sy ny toy izany koa ny Tale, ny toy izany kajy: ny biopic momba ny mpanjaka, ny tantaram-pitiavana horonan-tsary sy ny akanjo sarimihetsika.
Tsara indrindra fanontaniana
mifanena mandritra ny fotoana iray- maimaim-poana amin'ny aterineto ny lahatsary fampidirana Mampiaraka toerana fisoratana anarana maimaim-poana Mampiaraka toerana nalefa video internet tsy misy fisoratana anarana izay mba nahalala amin'ny chat roulette fisoratana anarana ankizivavy olon-dehibe Mampiaraka toerana olom-pantatra eny an-dalambe video video Mampiaraka online